“Olon-tsotra sady marina i Raly Tovony. Novonoin'ireo miaramila mpampandry tany sy ireo olona nanolotra sy nitory azy. Tamin'ny fomba feno habibiana no nahafaty azy. Nalain'izy ireo tao an-tranony eto Belo Tsiribihina izy ny alarobia 10 jolay teo, vavolombelona amin’izany ny mponina eto an-tanàna. Tamin’ny 16 jolay vao hita tao Ambalakida ny fatiny. Efa lanin'ny biby sy efa potika tanteraka ny razana ka tsy hita intsony ny endrika maha olona azy”, hoy ny havany, Esthy Ferco Rajahary.
Tsy nisambotra ny miaramila
Raha nanatanteraka ny famotopotorana maimaika anefa ny zandary any amin’ny borigadin’i Belo dia nilaza ireo miaramila fa tsy nisy fanamborana nataony. Ny 10 jolay no tsy hita io olona io ary ny 12 jolay vao nanatitra fitarainana ny fianakaviany nilaza fa nisy naka ny havany. Raha ny fampitam-baovao ofisialin’ny zandary, tsy misy diam-basy izay hiampangana ny mpitandro filaminana amin’ny vatan’ny maty fa novonoina tamin’ny zava-maranitra, raha ny fizahana nataon’ny mpitandro filaminana sy ny dokotera tompon’andraikitra.
Mbola mifamahofaho tanteraka ity raharaha ity. Eo am-piandrasana ny fitsarana azy ity nisy namono ity, hoy ny fianakaviana. Tsy misy vaovao azo ampitaina mikasika ny fanadihadiana sy ny famotorana lalina, hoy ny zandary any an-toerana. Nampanantena ity farany fa hampitaina araka ny fivoaran’ny toe-draharaha ny vaovao.
Ontsa tanteraka ireo fianakavian’ny maty naka ny razan’i Raly Tovony